Madaxweyne kuxigeenka Jubaland oo ka digey faragalino lagu sameeyo Jubaland - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaxweyne kuxigeenka Jubaland oo ka digey faragalino lagu sameeyo Jubaland
Madaxweyne kuxigeenka Jubaland oo ka digey faragalino lagu sameeyo Jubaland
September 19, 2019 Duceysane528
Madaxweyne Kuxigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa digniin adag ka soo saaray faragelin uu sheegay inay ku soo fool leeyihiin maamulkooda.
Waxa uu sheegay iney talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay faragelin toos ah ama mid aan toos aheyn ku sameysa maamulkooda, wixii dhibaata ah ee ka yimaadana waxa uu dusha uga saariyay dadka damaca shaqsiyadeed maamul dhan u burburinaya.
“Waxaan uga digeynaa faragelinta socota, kuwa nagu soo wajahan iyo kuwa hada la abuurayo, taasoo dhamaantood ah duminta nidaamkaan jira, duminta dadkaan wada nool in la dhibaateeyoo la kala diro, cid kastoo ku lug leh inay dib uga baxdo, haddii kale cawaaqibka ka dhasho mas’uuliyadeeda iyadaa qaadi doonto” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Madaxweyne Kuxigeenka Jubaland ayaa ku hanjabay in ka maamul ahaan ay is difaaci doonaan, maadaama dhismaha maamulka Jubaland ay ku soo bixiyeen dhiig iyo maal fara badan.
Dhinaca kale waxaa uu ugu baaqay dowladda Federaalka inay shuruud la’aan ku sii deyso Wasiirka Amniga maamulka Jubaland C/rashiid Janan, isgaoo sheegay inuu sifo aan sharci aheyn uu ku xiran yahay, isagoo ahaa qof xasaanad leh.
Maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore ku eedeeyay dowladda Federaalka faragelin iyo cunaqabateyn inay ku hayaan, waxaana khilaafka dowladda Dhexe iyo dowlad goboleedka Puntland uu gaaray meeshii ugu xumeyd, kaddib markii dowladda ay ku tilmaamtay doorashadii Kismaayo mid aan sharci aheyn, isla markaana ku amartay diyaaradaha aadaya Kismaayo iyo kuwa ka imaanaya inay soo maraan Muqdisho.
Gudoomiyaha degmada Warshiikh oo dhaawacay xubin katirsan golaha deegaanka degmadaas